How to write CV when you do not have any working experience ﻿
How to write CV when you do not have any working experience
Tags: job interview cover letter Myanmar hr advice CV for freshers candidates work my job
Identify first what makes you suitable for the role
It isn't only paid/works experience that counts. Voluntary or community involvement, work placements, coursework, personal projects and extracurricular activities can all be highlighted to show your suitability. Put yourself to the employer's perspective – decide on the interesting factors, where you have used relevant skills, and then make these prominent on your CV.
Aside from emphasizing your education, you should also try to work out which transferable skills you may have gained during:
Reflect on the experiences you’ve had – internships, volunteer work, entrepreneur activities, awards and honors.
You should put question to yourself like: What have you learned about yourself? What sets you apart and how would you bring value toapotential employer?
These descriptors can be woven into the resume, cover letter or email.
If applicable, include extracurricular activities like internships or roles which require you to apply and be selected, such as teaching assistant, resident hall assistant, or other paid work on campus.
လုပ်ငန်းတွေ့အကြုံမရှိခြင်းကြောင့် သင်လိုချင်သောအလုပ်အကိုင်အတွက် တွန့်ဆုတ်နေပါသလား? သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၊ အရည်အချင်းများ၊ ကြိုးစားချင်စိတ်နှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့အပေါ်တွင်သာ အဓိကထားပါ။
သင်မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမည်ကို ဆန်းစစ်ပါ။
လစာဖြင့်လုပ်သောအလုပ်တခုတည်းကသာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်း၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများသည်လည်း သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်သင့်လျှော်သည့်အလုပ်ကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ပေါ်လွင်စေသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရေးသားရာတွင် အလုပ်ရှင်များဘက်မှကြည့်လျှင်သိသာထင်ရှားစေရန်ရေးသားသင့်သည်။
ပညာအရည်အချင်းများကိုလည်း အထူးပြုရေးသားကာ သင်ရရှိသောအရည်အချင်းများကို အောက်ပါတို့ထံမှ ရရှိခဲ့ကြောင်းရေးသားပါ။
(၂) ကျောင်းပိတ်ရက်အလုပ် (နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်)
အလုပ်ရှင်များသည် သင့်ကိုအခြားသူများထံမှ ကွဲထွက်စေသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေလိမ့်မည်။
သင့်ကိုယ်သင် ဘာတွေသင်ခဲ့ပြီးပြီလဲ? ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် သင့်ကိုအလုပ်ရှင်က သတိထား သဘောကျမိစေနိုင်သလဲ?
အထက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့်တကွသင် CV ကိုရေးထည့်လိုက်ပါ။